ဒါက Google Pixel4မှာသုံးမယ့် Design ဖြစ်လာနိုင်မလား??? - PX
ဒါက Google Pixel4မှာသုံးမယ့် Design ဖြစ်လာနိုင်မလား???
’Pixel’ လို့ပြောလိုက်ရင် Smartphone Fan တွေကြား မသိသူမရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့၊ တစ်နေ့တစ်ခြား အမာခံပရိတ်သတ်တွေ တိုးပွားလာတဲ့၊ Developer တွေနဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ အသည်းစွဲ၊ Google ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Brand တစ်ခုဆိုရင် မမှားလောက်ပါဘူး။ Pixel ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကိုပြောပါဆိုရင် Android OS ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Feature နဲ့ Update တွေကို ဦးဦးဖျားဖျားသုံးနိုင်တဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်သလို အရှည်ကြာဆုံး (၃ နှစ်တာ) OS Update ကိုရရှိနိုင်တဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတာပါ။ နောက်ပြီး Camera ၂ လုံး၊ ၃လုံးနဲ့ဖုန်းတွေကို Camera တစ်လုံးထဲနဲ့ ယှဉ် Fight ပြနေတဲ့ ရှားပါးဖုန်းမျိုးစိတ်လည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Pixel ရဲ့ Next Generation ထုတ်လုပ်မယ့်ရာသီမရောက်ခင် ခုချိန်ကတည်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဒီခန့်မှန်း Design ကြောင့် Camera တစ်လုံးထဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ရိုးရာဟာ Pixel4မှာအဆုံးသတ်တော့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ထွက်ရှိလာတဲ့ Pixel 4XL ရဲ့ Design ပုံကြမ်းမှာတော့ Dual Camera Set-up ကို ကျောဘက်မှာ ခုလိုအလျားလိုက်မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။
ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ သူ့ရဲ့ရှေ့ဘက် Design ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ Notch ကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ Pixel 3XL ရဲ့ Design ကို Galaxy S10+ မှာလို Punch Hole နဲ့ ခုလိုအစားထိုးမလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ နောက်ပြီး ကျောဘက်မှာမပါလာတော့တဲ့ Fingerprint Scanner ကြောင့် Ultrasonic In-Display Fingerprint ဟာ Pixel4Series နဲ့အတူ ပါဝင်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ G Logo နဲ့ တခြား သိသာတဲ့ Design ပိုင်းအပြောင်းအလဲကိုတော့ ပုံမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူး။
Prototype အလုံးအထည်လိုက်ထွက်လာရင်တော့ ရာနှုန်းပြည့်ယုံစားမရတဲ့ Smartphone လောကမှာ စာရွက်ပေါ်က Design တစ်ခုကို အတည်ပြုဖို့ဆိုတာက မိုက်ရူးရဲဆန်ရာကျနေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Theoretical အရ အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ အခု Design ဟာ Next Gen Pixel Phone အတွက် Fan အများစုမျှော်လင့်တဲ့ အနီးစပ်ဆုံး Design လဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုခန့်မှန်းမှုတွေကမှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ October မှာကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ Pixel4Series နဲ့အတူ စောင့်ကြည့်ရင်ခုန်ကြရမှာပါ။
ေစ်းသက္သာမယ္၊ ၾကာမယ္၊ Xiaomi Foldable